ဘာကြောင့် Facebook account တွေ Disabled ချခံရတာလဲသိဖို့ | Online Service Center Myanmar -->
ဘာကြောင့် Facebook account တွေ Disabled ချခံရတာလဲသိဖို့
Disabled ချခံရတာတွေမှာ အမျိုးအစားက ကျူးလွန်တဲ့ပေါ်၊ ချိုးဖောက်တဲ့ပေါ်မူတည်လို့ အများကြီးရှိပါတယ်။
Security ( Temporarily disabled asasecurity precaution ) Disabled.
Identity ( Confirm identity ) Disabled.
Underage ( Facebook requires all members to be at least 13 years old ) Disabled.
Policy ( Violating Facebook's Statement of Rights ) Disabled.
Ineligible ( Violating Facebook's Statement of Rights and Responsibilities ) Disabled.
Copyright ( intellectual property violations ) Disabled.
Permanently ( Violating Facebook's Community Standards ) Disabled.
လိုမျိုးတွေ အစားစားရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး ရိုးရိုး Disabled ကနေ ရာသက်ပန် ပြန်သုံးခွင့်မရှိတော့တဲ့ Disabled မျိုးအထိကျတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အကောင့်လေးတွေ ရေရှည်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Disabled တွေနဲ့ မကြုံရအောင် ဆောင်နိုင်၊ ရှောင်နိုင်ဖို့ လေ့လာပြီး မှတ်သားထားကြစေချင်ပါတယ်။
အောက်ကဟာကတော့ Disabled နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖျဉ်းသိရအောင်လို့ Help Center က စာကို မြန်မာလိုပြောင်းပြီး ပြန်ထည့်ပေးထားတာပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အား ပိတ်သိမ်းခံထားရသည်။
( My personal Facebook account is disabled. )
ကျွန်ုပ်၏ အကောင့်အား ပိတ်သိမ်းခံထားခြင်းဟုတ်မဟုတ် မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း?
သင့် Facebook အကောင့်ဖျက်သိမ်းခံထားရပါက သင်လော့အင်ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားချိန်တွင် သင်၏အကောင့် ပိတ်သိမ်းခံထားရကြောင်း မက်ဆေ့ချ်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ သင်လော့အင်ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားချိန်တွင် ပိတ်သိမ်းခံထားရကြောင်းမက်ဆေ့ချ်ကို မတွေ့ရလျှင် သင်သည် အခြားပြဿနာကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လော့အင်ဝင်ရောက်သည်နှင့် ပတ်သတ်သောပြဿနာများ( https://my-mm.facebook.com/help/105487009541643?helpref=https://www.facebook.com/aungkyawsoe.sb )အားဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလေ့လာရန်။
ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်၏အကောင့်အား ပိတ်သိမ်းခံထားရသနည်း?
Facebook မူဝါဒများ( https://my-mm.facebook.com/terms?helpref=https://www.facebook.com/aungkyawsoe.sb ) အားမလိုက်နာသောအကောင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်သိမ်းပါသည်။ အချို့ဥပမာများတွင်ပါဝင်သည်မှာ-
1. Facebook မူဝါဒများကိုမလိုက်နာသော အကြောင်းအရာများတင်ခြင်း။
4. လူမှုစံနှုန်းများအားချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင်ခွင့်မပြုထားသည့် အပြုအမူများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခြင်း။
5. အခြားလူများအား စော်ကားရန်၊ ကြော်ငြာရန်၊ ပရိုမုတ်လုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် အခြားခွင့်မပြုထားသည့် အရာများ ပြုလုပ်ရန်အလို့ငှာ အခြားလူများကို ဆက်သွယ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်အား ပိတ်သိမ်းခံထားရလျှင် ဘာလုပ်နိုင်သနည်း?
သင့်အကောင့်အား မှားယွင်းစွာပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရသည်ဟုထင်လျှင် ဤဖောင်( https://my-mm.facebook.com/help/contact/260749603972907?helpref=https://www.facebook.com/aungkyawsoe.sb ) ကိုသုံး၍ ပြန်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
အချို့သောကိစ္စများတွင် သင့်အကောင့်အားမပိတ်သိမ်းခင် သတိပေးချက်ပေးပို့ခြင်းမရှိနိုင်ကြောင်းမှတ်သားထားပါ။ Facebook လူမှုစံနှုန်းများ( https://my-mm.facebook.com/communitystandards/?helpref=https://www.facebook.com/aungkyawsoe.sb )အားပြင်းပြင်းထန်ထန် ချိုးဖောက်ထားသောကြောင့် ပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရသည့်အကောင့်များအား ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ရယူပေး၍မရပါ။
မူရင်း ပို့စ် လင့် => https://my-mm.facebook.com/help/103873106370583?helpref=https://www.facebook.com/aungkyawsoe.sb